10 maimaim-poana fanaovana rindrambaiko maimaim-poana tokony andramo (2020) - Softwares
Beat 10 maimaim-poana manao rindrambaiko tokony hozahanao
Nisy andro izay tsy maintsy namandrihanao studio fandraisam-peo ary nomena fe-potoana handrakarana ny zava-drehetra ianao.Nipoitra ny rindrambaiko fanaovana Beat, ny zavatra rehetra dia nanova ny fomba fanaovana mozika.Azon'ny rehetra jerena ny famokarana mozika maoderina. Noho izany, raha manana fahalalana momba ny fanaovana beat ianao dia afaka misintona ilay rindrambaiko mora foana ary manandrana ny tananao aminy. Na iza na iza dia afaka mianatra ny fototra ary avy eo mamorona hira ao anatin'ny minitra vitsy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka ny tsara indrindra izahay hanao lisitra ny sasany amin'ireo rindrambaiko fanaovana beat beat tsara indrindra izay misy ankehitriny.
Fampidinana rindrambaiko maimaim-poana maimaim-poana:
1. Avid Pro Tools Voalohany
Ny Avid Pro Tools First dia fantatra amin'ny hoe kinova maimaim-poana. Izy io dia fanontana lite an'ny fitaovana Pro.Pro Tools dia fantatra fa DAW manara-penitra ny indostria. Noho izany, raha manomboka amin'ny tsimbadika maimaim-poana ianao dia hanome anao fampidirana tsara ny fomba fiasa marina. Raha tianao ny fiasany, afaka manavao ianao amin'ny manaraka.Na dia misy fetrany aza ny Avid Pro Tools, dia afaka manoratra làlana audio 16 ianao, làlan-jotra virtoaly 16, ary koa mandrakitra làlana 4 amin'ny fotoana iray ihany.
Ity rindrambaiko maimaimpoana ity dia miaraka amin'i Xpand! 2, izay plugin ilaina miaraka amin'ny feo natsangana.Ny endri-javatra fanamoriana lalana dia manampy ny solosainanao amin'ny fampiasana CPU ary manakana ny fianjerana.Ny fitehirizam-boky dia miaraka amina feo avo lenta izay azonao ampiasaina amin'ny kapoka ataonao.
Safidy hafa ny LMMS rehefa mitady rindrambaiko fanaovana beat maimaim-poana ianao.Raha mampiasa Windows, Mac, na Linux ianao, dia miasa miaraka amin'izy telo mianaka ity DAW ity.Amin'ity rindrambaiko ity dia afaka manangana ny paoinao ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sequencer ary misafidy ny BPM sy ny sonian'ny fotoana tadiavinao.
Ny rindrambaiko dia mamela ny playback fanamarihana amin'ny alàlan'ny keyboard midi na azonao atao ny mampiasa ny keyboard amin'ny solosainao na solosainao.Amin'izany ianao dia manana ny fahaizana manao gadona sy manamafy ny lalan'ny zavamaneno, izay manampy anao hanangona ny amponga sy ny bas ho lasa gadona iray.
Ny Piano Roll Editor ao anatin'ity rindrambaiko ity dia manampy anao hahita ny feon-kirao.Ao amin'ny LMMS dia ho afaka hanafatra rakitra MIDI koa ianao.
MuseScore dia rindrambaiko iray hafa ao amin'ny lisitry ny rindrambaiko fanaovana beat maimaimpoana. Somary hafa kely izy io satria mifantoka bebe kokoa amin'ny fanovana ny notation. Amin'izany, azonao atao ny mampihatra teknika klasika sy fahalalana koa amin'ny fanaovana gadona anao.Amin'ity rindrambaiko mahavariana ity dia ho afaka mifehy ny elanelana sy ny haben'ny zavamaneno rehetra ianao.Ny zava-drehetra avy any amin'ny Staves, clefs, ary sendrasendra dia azo lalaovina miaraka amin'ity rindrambaiko ity mba hahazoana vokatra mahavariana.
Raha tsy manana fahalalana betsaka momba ny teoria mozika ianao dia ho fitaovana tsara hianarana koa ny MuseScore. Tena mora ampiasaina izy io.Endri-javatra mahavariana sy tena ilaina amin'ity rindrambaiko ity dia ny ahafahanao mamaritra ny hitsin-dàlan'ny keyboard rehetra araka izay tianao.Izy io dia manana Midi Input, import, ary export options izay afaka manampy anao hanao fitokonana feno ao anatin'ny rindrambaiko ary avy eo tahirizo mba ho vita aoriana kely na aondrany eo.
Raha manana fahalalana be momba an'i Sibelius ianao dia hahatsapa ho anao ny MuseScore.Ny ankamaroan'ny mpamokatra dia manana fahazarana raikitra miasa. Noho izany, ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity dia mety hahasoa anao satria azonao ampiasaina tahaka ny safidinao.
Tracktion dia mety amin'ny fanaovana beat.Tsy misy fameperana io. Afaka mamorona làlana tsy voafetra ianao hanamboarana ny baombao amin'ny alàlan'ny fampidirana audios na santionany.Izy io dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny plugins. Ny sisa ataonao dia ampidiro ao amin'ny folder VST ary azonao ampiasaina amin'ny lalanao ao anatin'ny rindrambaiko. Fantatra amin'ny dikan-teny maimaim-poana an'ny Waveform Pro izany, koa raha efa nampiasa Waveform ianao dia ho mora kokoa aminao izany. Vetivety dia azonao atao ny manavao ny kinova karama ary avy eo afaka mahazo fidirana amin'ireo endri-javatra mahasoa maro hafa ianao.
Mora ny mivezivezy ny amponga mikrô ary manome anao fampisehoana an-tsary mazava ny daroka.Tracktion dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa izay antsoina hoe plugin sandboxing. Rehefa ampodinao ity fampiasa ity dia hiaro ny fotoam-pivorianao io amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fisorohana ny fampiasana CPU tsy ho ampiasaina be loatra, fa tsy ny fanapotehana ny rindrambaiko, hanidy haingana ny plugin izy ary hisoroka ny asanao very.
Ny kinova maimaimpoana an'ny studio FL dia voafetra ihany, saingy mbola ho azonao ampiasaina ihany izy io hanamboarana sy handefasana kapoka na dia misy fetrany aza.Mamela anao hitahiry ny tetikasanao izy io fa tsy ho afaka mamoha ireo tetik'asa ianao amin'ny manaraka. Ka noho izany dia tsy misy afa-tsy session iray hiasa amin'ny beat anao.
Fl kinova maimaimpoana Fl Studio dia ahafahanao manondrana ny tadinao ao anaty rakitra WAV na MP3. Mamela anao hiditra amin'ny endri-javatra rehetra ao amin'ny DAW izay misy compresseur, santionany, korora ary plugins hafa.FL studio dia somary tsotra ampiasaina ary mamela anao hijery ny fizotran'ny fanaovana paozy aza tsy afangaro amin'ny safidy rehetra.
GarageBand no tena rindrambaiko fanaovana doka malaza izay nataon'i Apple. Ity rindrambaiko ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny fitaovana Apple. Noho izany, tsy afaka mampiasa azy io ianao raha manana Mac, iPhone na iPad.Azonao atao koa ny manampy feon-javatra mitombina, gadona amponga efa voarakitry ny lalanao miaraka amin'ny plugin Drummer. Kit kitapo feno koa haseho eo amin'ny efijery ao anatin'ity rindrambaiko ity.
GarageBand dia fitaovana mahagaga ampiasaina amin'ny iPhone-nao satria mamela anao hanao mozika amin'ny karazana toe-javatra rehetra ianao. Ho azonao atao koa ny manoratra feo amin'ny alàlan'ny mikrô natsangana finday.
Ao anatin'ity rindrambaiko ity dia misy ny fanampin'ny Bass Amp Designer.Ny trano famakiam-boky ao anaty GarageBand dia be dia be ho an'ny rindrambaiko fanaovana maimaim-poana.Amin'ny iRig, azonao atao ny mampiditra mivantana ny findainao amin'ny tariby jack ary manoratra ao amin'ny GarageBand amin'ny fitaovana elektrika rehetra.
Lalao 15 tsara indrindra toa an'i Roblox
Takelaka tsara indrindra hijerena sarimihetsika
Studio One 4 Prime dia mamela anao hampiasa endri-javatra mahavariana maro nefa tsy mila mandany vola tokana. Izy io dia manana fisintomana tsotra sy fampidinana mba hamoronana mora foana ny fikapohana.Amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity dia afaka miditra amin'ireo plug-in Native Effects tena izy ianao, izay azonao ampiasaina hikirakira ny feon'ny tendanao.
Ary koa, ny zavatra tsara indrindra dia ny tsy misy ferana ao anatin'ity rindrambaiko ity raha ny fanondranana ny baombao no resahina.
Plugins - Fitaovana tsara indrindra hanaovana Beat
Rehefa misafidy rindrambaiko fanaovana beat maimaim-poana dia tsara kokoa ny manamarina raha mamela anao hanafatra plugins sasany. Amin'izany ianao dia manokatra ny varavarana amin'ny safidy fikarakarana tsy misy farany.Rehefa manao kapoka dia manana tanjona ny mpamokatra rehetra dia ny hamokatra zavatra tena miavaka. Ny plugins dia manome anao zavatra mitovy amin'izay tadiavinao. Mampiakatra ny fandresena azonao amin'ny dingana manaraka.
Noho izany, ity lahatsoratra momba ny rindrambaiko fanaovana beat maimaim-poana tsara indrindra misy androany ity dia nosoratana hanampiana anao lehilahy amin'ny safidy mety amin'ny fomba famokarana. Maimaimpoana daholo ireo rindrambaiko nitanisa anay etsy ambony, noho izany, tsy misy antonymanahy momba izany. Azonao atao ny mandeha misintona ny seta feno amin'izao fotoana izao ary milalao manodidina mba hahitana izay mety aminao indrindra.
Toerana mozika tsy voasakana - Henoy ny mozika na aiza na aiza
Apple Music Student Discount (2020)
Emulator PS4 tsara indrindra ho an'ny Windows PC (2020)
fampiharana amin'ny chat ho an'ny fisintomana maimaim-poana amin'ny pc
taplr vonoy ny fomba azo antoka raha tsy miditra
ny fomba fampifandraisana ny kaonty xbox roblox amin'ny pc
rohy hijerena sarimihetsika an-tserasera
fomba fampidinana google chromecast
mijery sarimihetsika rehetra amin'ny Internet maimaim-poana